သတ္တုကိုယ်ထည် မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို Qualcomm တီထွင် - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
သတ္တုကိုယ်ထည် မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို Qualcomm တီထွင်
သို့မဟုတ် case များပါဝင်သော ဖုန်းများသည် Qualcomm မှဖန်တီးသော နည်းပညာသစ်ဖြင့် ထုတ်ကုန်အချင်းချင်း ကြိုးမဲ့အားသွင်း နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
Qualcomm ၏ ကုမ္ပဏီခွဲ Qualcomm Technologies ကော်ပိုရေးရှင်းသည် သတ္တုကိုယ်ထည် မိုဘိုင်ထုတ်ကုန်များကို ကြိုးမဲ့ အားသွင်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်
ဖန်တီးပေးသည့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် tablet ကဲ့သို့ သတ္တုကိုယ်ထည် ပါဝင်သော ပိုမိုကြီးမားသော အရာဝတ္ထုများကို အားသွင်းနိုင်သည်။
Qualcomm သည် Rezence ဟုခေါ်ဆိုသော စနစ်နှင့်ဆင်တူသော WiPower ဟုအမည်ရသော
နည်းပညာတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ WiPower ၏ magnetic resonance သည် ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတွင် အားသွင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မထိခိုက်စေဘဲ သတ္တုကိုယ်ထည်များကို ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအရ Qualcomm ၏ WiPower သည်သတ္တု ကိုယ်ထည်ဖြင့်
ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုသာ အားသွင်းနိုင်သည်။ Qualcomm ကတီထွင် လျက်ရှိသော နည်းပညာသည် သုံးစွဲသူများ အသုံးပြုနိုင်မည့် စီးပွားဖြစ် အဆင့်တစ်ခုသို့ မရောက်ရှိသေးပေ။ ထိုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သတ္တုကာဗာ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်ကုန်ကို အားသွင်းရန် မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်သူများ ပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့် Qualcomm အနေဖြင့် သတ္တုကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် case တစ်ခုဖြင့် အခြားထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်းကို ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်မည့် နည်းပညာသစ်ကို စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု အကြီးတန်း ဒါရိုက်တာ မတ်ဟန်ဆစ်ခ်ကာက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဝါသနာအရ စုဆောင်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ မတင်စေချင်သော မိမိကိုယ်ပိုင် ပို့စ်များကို တင်မိပါက maungpauk@gmail.com သို့ လင့်နှင့်တကွ အကြောင်းကြားပေးစေလိုပါသည်။
အင်တာနက် ၅ မိနစ်ဖွင့်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးအကြောင်း သိနိုင်မယ့် apk
Android Device တွေမှာ ဒီ apk လေးကိုထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ပဲ Internet ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ချက်ချင...
အင်တာနက်လေး ၅ မိနစ်ဖွင့်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာ့သတင်း၊ မြန်မာ့သတင်း၊ အားကစား၊ နည်းပညာ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ အနုပညာ စတဲ့ သတင်းပေါင်းများစွာကို အချိန်နှင့်တပြေ...
Clash of Clans ( COC ) 8.212.3 Update ထွက်ပြီ..
ဒီနေ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Clash of Clans ( COC ) 8.212.3 Update ဖြစ်ပါတယ်.. Play Store ကအဆင်မပြေသူများ အောက်ကလင့်မှာ ရယူနိုင်ပါပြီ... What&...
Drama, adult, Romance အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ဂျပန် ၁၈ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြာမင်းသမီးချောတွေဖြစ် ကြတဲ့ Rie Hara Azus...
ကဲ ကဲ.. ၁၈ ချစ်ညီကိုယ်တွေအတွက်အကြိုက်အမောပြေစေမဲ့ Adult, Drama, Semi, 18+ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဘဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုးရီးယားဇာတ်ကားကောင်းကြည်...
Feb 24 (32)
Feb 23 (66)
Facebook Page ကို Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ဒီမှာတင်သမျ Facebook က မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Pages
Copyright © 2011 by မောင်ပေါက်